Iskuul ku yaala Kisa oo ardada u diiday in ay tukadaan | Somaliska
Iskuul ku yaala kamuun yar oo lagu magacaabo Kisa oo ka tirsan gobolka östergotland ayaa u diiday ardada dhigata SFIga in ay ku tukadaan iskuulka ka dib markii ay sheegeen in Soomaalidu ay diideen in ay ka qeyb galaan maalinta lagu magacaabo Luciadag oo ka mid ah caadooyinka Kiristaanka ay sameeyaan taasoo ku beegneyn 13kii bishii December ee la soo dhaafay. Sida uu noo soo sheegay mid ka mid ah ardada iskuulkaas waxkabarata kaasoo codsadey in magaciisa aan la sheegin ayay macalimiinta iskuulku ka mamnuuceen ardada Soomaalida qolyar oo ay salaada ku tukan jireen ka dib markii ay Soomaalidu diideen in ay ka qeyb galaan Luciadag. Arintaan ayaa loo fasiran karaa cunsuriyad lagu cunsuriyenayo diinta ardada ayadoo ay u furantahay ardada inay ka dacwoodaan arintaan.
Iskuul ku yaala Kisa oo ardada u diiday in ay tukadaan
Iskuul ku yaala kamuun yar oo lagu magacaabo Kisa oo ka tirsan gobolka östergotland ayaa u diiday ardada dhigata SFIga in ay ku tukadaan iskuulka ka dib markii ay sheegeen in Soomaalidu ay diideen in ay ka qeyb galaan maalinta lagu magacaabo Luciadag oo ka mid ah caadooyinka Kiristaanka ay sameeyaan taasoo ku beegneyn 13kii bishii December ee la soo dhaafay.
Sida uu noo soo sheegay mid ka mid ah ardada iskuulkaas waxkabarata kaasoo codsadey in magaciisa aan la sheegin ayay macalimiinta iskuulku ka mamnuuceen ardada Soomaalida qolyar oo ay salaada ku tukan jireen ka dib markii ay Soomaalidu diideen in ay ka qeyb galaan Luciadag.
Arintaan ayaa loo fasiran karaa cunsuriyad lagu cunsuriyenayo diinta ardada ayadoo ay u furantahay ardada inay ka dacwoodaan arintaan.
“Sweden waxay u baahantahay 100 000 soo galooti ah sanad kasta”